स्वेता खड्काको ‘टिकटक’ मोह ! « Khabarhub
स्वेता खड्काको ‘टिकटक’ मोह !
काठमाडौं – नायिका स्वेता खड्का पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रमा खासै सक्रिय छैनिन् । केही महिनाअघि ट्युमरको अपरेसन गरेपछि उनी आरामको समय बिताइरहेकी छिन् । सँगसँगै आफ्नो व्यवसायलाई पनि समय दिइरहेकी छिन् ।
फिल्म क्षेत्रबाट टाढा रहे पनि स्वेता सामाजिक सञ्जालमा भने निकै सक्रिय रहने गर्छिन् । स्वेताले इन्स्टाग्राम, फेसबूकदेखि टिकटकमा समेत आफूलाई अपडेट राख्न भ्याएकी हुन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भावनाहरु शेयर गर्ने स्वेताले पछिल्लो समय टिकटकमा पनि भिडियोहरु अपलोड गर्न थालेकी छिन् ।
टिकटकमा स्वेतालाई झण्डै ८० हजारले फलो गरेका छन् भने उनले ८१ जनालाई फलो गरेकी छिन् । उनको सक्रियता पनि उत्तिकै देखिन्छ टिकटकमा । स्वेताले टिकटकमा भिडियो मात्र शेयर नगरेर स्लाइड तस्वीर पनि शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् ।
कतिपयले भने उनलाई टिकटकमा व्यस्त हुनुभन्दा बरु फिल्म करिअरलाई नै फलो गर्न सुझाउँदै कमेन्ट गरेका छन् ।
पछिल्लो समय स्वेता अभिनित फिल्म ‘कान्छी’ प्रदर्शनमा आएको थियो । उक्त फिल्मले खासै व्यापार गर्न सकेन । आजभोलि भने स्वेता कुनै पनि फिल्ममा देखिएकी छैनिन् । पछिल्लो समय फिल्म ‘हेलो जिन्दगी’ मा अभिनय गर्दै गर्दा एक्कासी बिरामी भएपछि उनले सो फिल्म छोडेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति : १८ असार २०७६, बुधबार ३ : ०२ बजे